My iPad Haizoshanduke! Pano iwe uchawana inoshanda mhinduro! - Zvimwe
bata screen pa iphone 6 plus isingashande
yangu facetime inoti yakamirira activation
ndinobatanidza sei iphone yangu kune isina waya printer
verizon kutsvaga dambudziko rebasa
My iPad Haizoshanduke! Pano iwe uchawana inoshanda mhinduro!
Yako iPad haizoshanduke uye iwe hauzive nei. Iwe unobata pasi bhatani remagetsi, asi hapana chinoitika. Muchikamu chino, Ini ndichatsanangura kuti nei yako iPad isinga batike uye kukuratidze maitiro ekugadzirisa dambudziko .
Nei iPad Yangu Isingaende?
Kumanikidza Kutangazve Yako iPad
Tarisa Yako iPad Charger
Pane Pane Dambudziko Neiyo Screen?
Kazhinji yenguva, iyo iPad haizoshanduke nekuti software yayo inopunzika. Izvi zvinogona kugadzira zvinoita kuti yako iPad haizoshanduke, kana ichinge yaive panguva yese.
Kunda kumisikidza yako iPad kuchaimanikidza kudzima uye nekukurumidza. Panguva imwe chete, pinda mubatirire bhatani reKusha uye bhatani reMagetsi kudzamara maona logo yeApple ichioneka pakati pekona. Yako iPad inodzoka kumashure nguva pfupi yapfuura!
waya yekuchaja pad isiri kushanda
Kana yako iPad isina bhatani reKumba, kurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, nekukurumidza tinya uye kuburitsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya wobata bhatani repamusoro kusvikira iyo Apple logo yaonekwa pachiratidziri.
Ongorora: Dzimwe nguva unofanirwa kudzvanya nekubata mabhatani ese (iPads ine bhatani repamba) kana bhatani repamusoro (iPads isina bhatani repamba) kwemasekondi makumi maviri kusvika makumi matatu pamberi peiyo logo yeApple.
Kana Iko Kutangazve Kwashanda ...
Kana yako iPad ikatendeuka mushure mekuita simba rekutanga, iwe waona kuti software glitch ndiyo yaikonzera dambudziko. Simba rekutangidza rinowanzo garoita mhinduro yenguva pfupi kune software glitch nekuti haina kunyatso gadzirisa chakakonzera dambudziko pakutanga.
Iri zano rakanaka kuchengetedza yako iPad ipapo. Izvi zvichachengeta kopi yezvose zviri pane yako iPad, kusanganisira ako mafoto, mavhidhiyo, uye vanobatika.
Mushure mekutsigira yako iPad, enda kuchikamu Yepamberi matanho ekugadzirisa software yechinyorwa chino. Ini ndinokuratidza maitiro ekugadzirisa rakadzama software dambudziko nekumisikidza zvese marongero kana kuisa yako iPad muDFU modhi, kana zvichidikanwa.
Unogona backup yako iPad uchishandisa komputa yako kana iCloud. Chirongwa chaunoshandisa kutsigira yako iPad kune komputa yako zvinoenderana nerudzi rwecomputer yauinayo uye software yairi kuita.
Backup yako iPad neKutsvaga
Kana iwe uine Mac ine macOS Catalina 10.15 kana nyowani, iwe unozotsigira yako iPad uchishandisa Finder.
Unganidza yako iPad kune Mac yako netambo yekuchaja.
Inovhura Tsvaga .
Dzvanya pane yako iPad pa Nzvimbo .
Dzvanya denderedzwa padyo ne Dzorera rese rako rePadad data kune iyi Mac .
Dzvanya pa Backup ikozvino .
Backup yako iPad uchishandisa iTunes
Kana iwe uine PC kana Mac ine macOS Mojave 10.14 kana pakutanga, iwe unoshandisa iTunes kutsigira yako iPad.
Unganidza yako iPad kune komputa yako netambo yekuchaja.
Dzvanya pane iyo iPad icon mune yepamusoro kona yekona yeTunes.
Dzvanya denderedzwa padyo ne Iyi komputa on Backups
Backup yako iPad uchishandisa iCloud
Inovhura Zvirongwa .
Bata zita rako kumusoro kwechiso.
Dhinda iCloud .
Dhinda ICloud negadziriro yeparutivi .
Batidza switch kuICloud Backup. Iwe uchaziva kuti switch iripo kana iri girini.
Dhinda Backup ikozvino .
Chimiro chebhawa chichaonekwa chichiratidza kuti inguvai yasara kusvikira backup yapera.
Ongorora: IPad yako inofanirwa kuve yakabatana neWi-Fi kuitira kuti dzorere kuICloud.
Dzimwe nguva iyo iPad haizobhadharise uye inodzokera kumashure zvichienderana nechaja iwe yaunobatanidza nayo. Mienzaniso yePads inobhadharisa kana yakabatana nekombuta, asi kwete yerojaja, yakanyorwa.
Edza kushandisa majaja akati wandei uye ona kana yako iPad inotanga kubatidza zvakare. Kazhinji kutaura, komputa yako ndiyo yekuvimbika yekuchaja yakavimbika. Ita shuwa yekuyedza ese USB madoko pakombuta yako futi, kana imwe isiri kushanda nemazvo.
maikorofoni nzvimbo pane iphone 6
Kana yako iPad ikafa uye ikasatendeuka, panogona kunge paine dambudziko nechaja yako tambo. Kutengesa tambo kunokanganisa kubhadharisa, saka nyatsoongorora mativi ese etambo kuti zvishaikwe.
Kana uchikwanisa, edza kukwereta tambo kubva kushamwari uye uone kana yako iPad yotendeuka zvekare. Kana iwe uchida tambo itsva yekuchaja, ndapota tarisa kune iyo chitoro chedu kuAmazon .
Yako iPad Inoti 'Izvi zvinowedzera zvinogona kunge zvisingaenderane'?
Kana yako iPad ichiti 'Ichi chishongedzo chinogona kunge chisingaenderane' kana iwe ukabatanidza tambo yekuchaja, tambo yacho inogona kunge isiri MFi inosimbiswa, inogona kukuvadza yako iPad. Tarisa uone chinyorwa chedu pa c tambo dzisina MFi dzinozivikanwa kuti uwane rumwe ruzivo.
Kana iTunes kana Tsvaga ikaziva yako iPad, edza imwe simba kutangazve payakabatana nekombuta. Kana simba rechipiri rekutanga risingashande, enderera padanho rinotevera uko ini ndichakurukura zvaunogona kugadzirisa.
Kana iTunes kana Tsvaga isingazive yako iPad zvachose, pane dambudziko nekambani yekuchaja (iyo yatakakubatsira iwe kugadzirisa pakutanga muchinyorwa) kana yako iPad ine dambudziko rehardware. Padanho rekupedzisira rechinyorwa chino, isu tinokubatsira iwe kuti uwane yako yakanaka yekugadzirisa sarudzo.
Yepamberi Matanho eSoftware Troubleshooting
Yako iPad inogona kusatendeuka nekuda kwedambudziko rakadzika re software. Matanho pazasi anokutungamira kuburikidza neakawanda marongedzero esoftware ekugadzirisa matanho anofanirwa kugadzirisa dambudziko rinoramba riripo. Kana nhanho idzi dzikasagadzirisa dambudziko neako iPad, ini ndinokubatsira iwe kuti uwane yakavimbika yekugadzirisa sarudzo.
Uku kumisazve kunodzosera zvese zviri muZvirongwa app kune zvisakakwana zvefekitori. Kukodzera kwako kuchaita senge pawakatanga kutenga yako iPad. Izvi zvinoreva kuti uchafanirwa kuseta rako Wallpaper, nyorazve maWi-Fi password, uye zvimwe.
Kugadzirisa zvese zvigadziriro pane yako iPad:
Dhinda general .
Bata Dzosa .
Bata Hola .
Pinda yako iPad password.
Bata Hola zvakare kusimbisa yako sarudzo.
kurota shumba dzichikutandanisa
Isa yako iPad mune DFU modhi
DFU inomirira Mudziyo Firmware Kwidziridzo . Tambo yega yega yekodhi pane yako iPad yakadzimwa uye kuiswazve, ichidzorera yako iPad kune yayo fekitori zvisizvo. Iyi ndiyo yakanyanya kudzika mhando yekudzoresa iwe yaunogona kuita pane iyo iPad, uye iri rekupedzisira danho iwe raunotora kuti ubvise zvachose kunze kwesoftware dambudziko.
DFU kudzoreredza maPads ine bhatani repamba
Dhinda uye ubatise bhatani remagetsi uye bhatani repamba kudzimara iyo skrini yasviba.
Mushure memasekondi matatu, sunungura bhatani remagetsi uchiramba uchidzvanya bhatani reKumba.
Dhinda uye bata bhatani repamba kudzamara yako iPad yaonekwa pakombuta yako
Dzvanya pa Dzosera iPad pakombuta yako.
Dzvanya pa Dzosera uye gadziridza .
Tarisa uone yedu vhidhiyo dzidziso kana iwe uchida rubatsiro ku isa iPad yako muDFU modhi .
DFU kudzoreredza maPads pasina bhatani repamba
Dhinda uye bata bhatani repamusoro kwemasekondi matatu.
Batisisa mabhatani ese maviri kwemaminitsi gumi.
Mushure memasekondi gumi, buritsa bhatani repamusoro, asi ramba wakabata bhatani rezwi kusvikira iPad yako yaonekwa pakombuta yako.
Dzvanya pa Dzosera iPad .
Ongorora: Kana iyo logo yeApple ikaonekwa pane yako iPad skrini mushure meChitatu 4, wabata mabhatani kwenguva refu uye unoda kutanga pamusoro.
IPad haizovhure: Yakagadziriswa!
IPad yako yadzoka! Isu tinoziva zvinoodza moyo apo yako iPad isingavhurike, saka ndinovimba iwe uchagovana ichi chinyorwa pasocial media nemhuri yako neshamwari kana vari kusangana nedambudziko futi. Kana uine chero mimwe mibvunzo, ndapota siya mhinduro pazasi.